Maxay ahayd Sababta Garsoorayaasha Ingiriiska loogu xulan waayey koobka aduunka? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maxay ahayd Sababta Garsoorayaasha Ingiriiska loogu xulan waayey koobka aduunka?
Published on March 30, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(30-3-2018) Garsooreyaasha waddanka Ingiriiska ayaan markii ugu horreysay loo qaadannin ciyaaraha Koobka Adduunka, taas oo noqonaysa in muddo 80 sannadood ah kaddib laga waayey saacadda ugu sumcadda iyo magaca weyn ciyaaraha ee Koobka Adduunka oo badhtamaha sannadkan ku qabsoomi doonna waddanka Ruushka.
Garsooreyaasha Britain oo ka kooban Ingiriiska, Scotland, Wales iyo Northern Ireland ayaan tegi doonin waddanka Ruushka, waxaana ugu dambaysay inay sidan oo kale ku dhacdo sannadkii 1938-kii.
Xidhiidhka kubadda Cagta FIFA guddida u qaabilsan garsoorka ayaa shaaciyey magacyada 36 garsoore oo qaban doona ciyaaraha Koobka Adduunka, kuwaas oo aanay ku jjirin kuwo dhalasho ahaan kasoo jeeda Britain.
Garsooraha kaliya ee FIFA u diiwaangashanaa ee liiskan ugu jiray ee kasoo jeeda Britain, waxa uu ahaa Mark Clattenburg oo qabtay ciyaartii finalka Euro 2016 ee Portugal ku guuleystay, hase yeeshee, isaguna sannadkii hore ayuu ka tegay shaqada garsoorka waxaana uu ka degay waddanka Sucuudiga oo uu ka noqday madaxa garsooreyaasha.
Britain may waayin garsooreyaasha oo kaliya, hase yeeshee, waxa kale oo aan lagu darin kaaliyeyaasha garsoorka oo ay tiradoodu tahay 63 qof, halka garsooreyaasha muuqaalka garsoor caawiyaha VAR laga soo xulan doono marba garsoorka aan shaqada ku qornayn maalintaas.
Sannadkii ugu dambeeyey ee Ingiriiska ama Britain looga waayo liiska garsooreyaasha Koobka Adduunka, waxay ahayd sannadkii 1838-kii, markaas kaddibna Koob adduun lama qabannin muddo 12 sannadood ah maadaama lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Sannadkii 1950-kii markii dib loo bilaabay Koobka Adduunka, ugu yaraan hal garsoore oo Ingiriis ah ayaa loo qaadan jiray.
Howard Web oo u dhashay Ingiriiska ayaa labadii Koob Adduun ee ugu dambeeyey ee 2010 iyo 2014 laga soo xushay waddanka Ingiriiska, waxaana uu qabtay ciyaartii finalka ee koobkii adduunka 2010 ay iskaga hor yimaaddeen Spain iyo Netherlands, kaas oo ka dhacay waddanka Koonfur Afrika.
Sidee Loo xushaa Garsooreyaasha?
Xidhiidhka kubadda cagta FIFA iyo xidhiidhka garsooreyaasha PGMOL ayaa si wada jir ah uga shaqeeya soo xulista garsooreyaasha.
Xidhiidhka Ingiriiska ee FA ayaa isagu u gudbiyey FIFA magacyada toddoba garsoore oo ay doonayeen in laga qaato, kuwaas oo kala ahaa Martin Atkinson, Stuart Attwell, Robert Madley, Michael Oliver, Craig Pawson, Anthony Taylor iyo Paul Tierney.
Maxaa lagu diiday garsooreyaasha Ingiriiska
Xili ciyaareedkan, waxa horyaalka Ingiriiska ee Premier League kasoo ifbaxday saluug weyn oo loo jeediyo garsooreyaasha, kuwaas oo warbaahintu siyaabo kala duwan u qaadaa dhigtay.
Tababareyaasha qaarkood, sida Wenger, Mourinho iyo Conte ayaa si toos ah u weeraray garsooreyaasha qaarkood, waxaana ay ku mutaysteen ganaaxyo.